Daraasad cusub oo xoojisay in mobile-du ay keenaan cudurka kansarka maskaxda – SBC
Daraasad cusub oo xoojisay in mobile-du ay keenaan cudurka kansarka maskaxda
Posted by editor on June 1, 2011 Comments
Daraasad cusub oo hor leh ayaa lagu muujiyey halista dhanka caafimaadka ee uu sababo telefoonada gacanta ee loo yaqaan mobile-ka, taasi oo lagu sheegay in ay qatar weyn ku keeni karaan qaybo ka mid ah maskaxda bini’aadamka.
Daraasadan oo ay maalgalisay hay’ada caafimaadka aduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa lagu xusey in dadka isticmaala Mobile-ka ay qatar weyn naftooda galinayaan, gaar ahaan cudurka kansarka ku dhaca maskaxda.
Daraasada oo ay soo saareen 31 saynisyahano uu u dhashay 41 wadan ayaa waxaa lagu ogaaday in singnal-ka mobile-ka ama shucaaca uu wato gaar ahaan antenada ay waxyeelo u geysato qaybo ka mid ah maskaxda.
Kulan mudo todobaad ah ka socdey magaalada Lyon ee wadanka Faransiiska ayaa 31-kaasi cilmibaare oo ka tirsan hay’ada caalamiga ah cilimibaarista cudurka Kansarka ( International Agency for Research on Cancer (IARC) ayey ka soo saareen cilmi baaristan.
Agaasimaah guud ee IARC Christopher Wild ayaa talo ku siiyey in mobile adeegsadayaasha ay isticmaalaan sameecadaha, isla markaana ay fariin diris ka doorbidaan in ay mobile-ka ku hadlaan.
Cilmi baaristu waxay cadeysay in ay shucaaca anteenada mobile-ku ay tahay tan ugu weyn ee waxyeelada u keenta maskaxda bini’aamka, taasi oo sababi karta cudurada kansarka maskaxda.
Hay’adda deegaanka Yurub ayaa mudooyinkii ugu dambeeyey waxay dabada ka riixaysay cilmibaarisyo kala duwan, tani oo ku aadan cabsida in shucaaca telefoonada gacanta ama mobile-ka ay halistoodu la mid tahay qatarta bini’aadamku ka qaado sigaarka & uurada ama qiiqa patroolka.
Talooyinka haboon ee dhanka caafimaadka ee ku socda Mobile Isticmaalayaasha (Mobile Users)
Ku xafid mobile-kaaga boorsada, intii aad ku qaadan laheyd jeebka ama jirkeega meel aad u dhaw, waayo daraasad horey u soo baxdey ayaa muujisay halista ragga boorsada yar ee mobile-ka ku xirta suunka dhexda inay mobile-ka shucaaca ka baxa uu waxyeelo u geysto uuna hoos u dhigo 30% minada ragga ama sperm waxa afka qalaad lagu yiraahdo.
Adeegso fariin qoraal ama text messages ama email hadii ay macquul kuu tahay, intii aad mobile-ka ku hadli laheyd.
Isku day inaad isticmaasho sameecadaha dhageha ee waayir la’aanta ah (wireless headset), isku day inaad 20cm mobile-kaaga ka fogeyso madaxaaga, taasi oo 98% hoos u dhigta waxyeelada shucaaca mobile.
Iska ilaali in mobile-ka aad ku qaadato jeebabka sare, waxaa jira dad jeebka bidix ee shaararka ama jaakadaha ku qaata mobile-ka, kuwaasi oo soo dhicitaanka mobile-ku uu yimaado xili uu ku dhaw yahay wadnaha taasi oo ah waxyeelo kale oo halis ah.
Isku day in mobile-kaaga marka aad garaacdo aad ka sii eegto shaashada in uu kuu baxay, in lagaa qabtey & in uu iska dhacayo, si dhicitaankiisa ama hawo galistiisa aadan dhagta ugu heyn, telefoonada dambe oo dhan ee casriga ah waxay leeyihiin tilmaam in uu dhacayo iyo in lagaa qabtey.
Isku day inaad yareyso inta aad ku hadasho mobile-ka, laba daqiiqaba ha ahaatee waxay leedahay waxyeelo sida ay sheegayso daraasadu.
Ilmaha yar yar waxay halis ugu jiraan waxyeelada mobile-ku u geysto maskaxda, sidaasi darteed mar kasta ka ilaali inay ku hadlaan waqti badan.
Ha sameyn wicitaan mobile-ka hadii aanay jirin awood anteenada (signal strength) waxaa wanaagsan in mobile-ku uu haysto qaadasho xiriir (establish a connection), inta badan daaraha hoostooda, wiishashka guryaha loo raaco & gawaarida dhexdooda waxay keenaan in mobile-ku uu awoodi waayo in uu xiriir (connection) sameeyo.